प्रवासको तीजलाई मेड इन नेपाल बनाउँदा कस्तो होला ?-Brtnepal.com
Loading... प्रवासको तीजलाई मेड इन नेपाल बनाउँदा कस्तो होला ?
Published on September 4, 2016 at 9:12 pm
भगवान् महादेवको आराधना गरी हिन्दुनारीहरुले मनाउने तीज पर्वले यो वर्ष भरखरै बिदा लिएकोछ । नेपालमा झैँ प्रवासमा पनि आजकल तीज एक दुई दिन हैन, करिब महिना दिन नै लगाएर मनाउने गरिन्छ । नेपालका ख्यातीप्राप्त कलाकार देखि स्थानीय कलाकारहरूको राम्रै जमघट हुन्छ । प्रवासमा पनि नेपाली नारीहरू तीजका गीत हुँदै नेपाली हिन्दी डिस्कोका गीतमा महिनौ झुम्ने गर्छन् ।
दिनभरको कामको थकान नै किन नहोस एक छिन कै लागि भए पनि नाचिन्छ । नयाँ लुगा र गहनाको त कुरै भएन । तीज र यस्तै नेपाली चाडवाड कै लागी भनेर हरेक नारीहरूले महंगा गरगहना, साडी र श्रृगारका सामानहरू किन्ने गर्छन् । प्रवासमा त झनै आफ्नै कमाइमा रमेका महिलाका लागि यस्ता सौखिन चिजहरु किन्न कुनै गाह्रो कुरा पनि भएन । नेपाल र भारतमा चलेका नयाँ नयाँ डिजायनका गरगहना र श्रृगारीक बश्त्र लगाएर को भन्दा को कम देखिएका नेपाली नारीहरू चिरिच्याट्ट बनेर पूजा गरेका र दर खाएका फोटाहरु सामाजिक सञ्जालमा जता त्यतै देख्न सकिन्छ ।
स्थानीय संध संस्थाहरूले यसै मौकामा सानो तिनो भए पनि फण्ड सङ्कलन गर्ने अवसरको रूपमा लिई अनेकन धार्मिक र सास्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन्छन् । यो रमझम करिब करिब एक महिना नै चल्छ ।
मैले सुदुर पश्चिममा केही जिल्लाको तीजको अनुभव गरेको जो पूर्वको भन्दा केही फरक देखिन्छ । मैले सानो छँदा आमाहरुले मनाउने तीज पनि हेरेको थिए जो अहिले आएर ज्यादै तडक भडकको भन्दा फरक नपर्ला । त्यस ताका नत एक महिना सम्म नै दर खाने चलन थियो नत अमर्यादीत गीतहरू सुन्ने र नाच्ने नै गरिन्थो । भगवान् शिव-पार्वती र गणेशको प्रतिमा बनाई घरमा वा नजिकको शिवालयमा पूजा आराधना गर्ने चलन थियो । पूजा सँगै नारीहरूले भजन कृतन गर्ने र मङ्गल फागहरु (भगवानको आराधना) र लोकभाकाका तीज गीतहरू गाउदै नाच्ने चलन देखेको थिए । तर आजकल ती मङ्गल फाग र भजन कृतनहरु हराउदै आधुनिकताले बेरेको संस्कारोन्मुख भएकोछ । कसैलाई त ती संस्कार पाखे र काठे नै लाग्न सक्छन् । यसमा मेरो कुनै भन्नु छैन आधुनिकता सँगै हामी आधुनिक भैसकेका छौ ।
नेपाल मै त यस्ता कुराहरू लोप भैसकेको छ भने प्रवासमा बस्नेले त झनै यी र यस्ता पक्षहरूको अवलम्बन गर्न गाह्रोछ । तीज एक धार्मिक मात्र नभएर सांस्कृतिक पर्व पनि हो । दीदीबहिनीहरुले धर्मको परिपालना सँगै रमाइलोको लागि नेपाली कला र संस्कृति झल्कने किसिमले यो पर्वलाई परापूर्वकाल देखि नै मनाउने गरेको हो । प्रवासको कुरा गर्ने हो भने जब तीज सुरु हुन्छन् स्थानीय सामाजिक सङ्गठनहरू जुरम्राउन थाल्छन । जसमा विशुध्द नेपाली पाराको कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हो । स्थानीय कलाकारहरूले सभ्य तरिकाले तीजका गीतहरू, मङ्गल फाग, भजन, पस्कुनुका साथै व्यवस्थित किसिमले हुनु पर्ने हो ।
तर यहाँ तीजका नाममा एउटा हल वा कुनै रेष्टुरेन्टमा भिड जम्मा गरी जे, जसरी, जो कोहीले नाच्दै फोटो खिची पोस्ट गर्ने विकृति फैलिन गएको देखिन्छ । यती सम्म कि महिलाहरूको पवित्र कार्यक्रममा पुरुषहरू खुट्टा लरबराउँदै नाचेको पनि देखिन्छ । जो हाम्रा भावी नानीहरूका लागी तीज धार्मिक र सांस्कृतिक भन्दा डिस्कोको मनोरंजन गर्ने चाड भनी हस्तान्तण हुने खतरा बढेको छ ।
हिजो आज प्रवासमा रहेका संध संस्थाका आदर्शहरु नेपाल भक्ति र नेपालीपनको उत्तानका बारेमा बोलेको जता त्यतै सुन्न र पढ्न पाइन्छ । कोही धर्म कला संस्कृतिको जगेर्नामा त कोही नेपाली समाज र नेपालका राजनैतिक आदर्शका पछाडि कुदेका छन् । लाग्छ सबै महान् छन् । तर यहाँ समाजिक र धार्मिक भन्दा पनि स्व-मान, प्रतिष्ठा र सम्मानमा उनीहरूको आदर्श बिलय हुन्छ । तीज र यस्तै प्रकारका कार्यक्रमको आयोजना गर्ने आयोजकले पनि पहिलो काम धर्म र संस्कृतिको ठानी मनोरन्जनलाई दोस्रो प्राथमिकता दिनु पर्ने हो जो हुन सकेको छैन ।
अहिले तीज होस या यस्तै प्रकारका चाडपर्व हामीले जानीजानी फजुल खर्च बढाइ रहेका छौ । यो तीजमा पनि तीस देखि साठी-सत्तरी हजारका लेहंगा र साडी लगाउनेको भिड कम थिएन । एक-से-एक लुगाका बिचमा महंगा गहना देखाई रहेका प्रवासी हुन कि नेपालमा रहेका नारीहरू हुन सबै तडक भडकमा थिए । यी सबै नारीहरूले लगाउने लुगा कपडा र श्रृगारका सामानहरू सबै भारत बा अन्य देशबाट आयातित देखिन्छन र यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालले लिन सकेको छैन ।
आज एउटा तीजको मात्र कुरा गर्ने हो भने हरेक प्रवासमा रहेका नेपाली दिदी-बहिनीहरूले करिब पचास हजारको हाराहरिको लुगाकपडा र श्रृगारीक सामानहरू किन्नमा खर्चेको अवस्था छ । हामी जे जति राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताका कुरा गर्छौ आदर्शमा मात्र सीमित रहेकाछौ । यदि हामीले कमसे कम नेपाली चाडवाडमा नेपालमा बनेका साडी र गरगहनाको मात्र प्रयोग गर्न सकियो भने नेपाल प्रतिको प्रवासीहरुको सच्चा राष्ट्रभक्ति हुनजाने देखिन्छ ।
कैयो नेपाली जन समुदायहरू (जस्तै नेवार) र सेना र प्रहरीका श्रीमतीसंधले गाउने लुगाकपडा नेपाल मै बनेका हुन । कति राम्रा छन् । हामी प्रवासी सामाजिक संध संस्थाहरूले तीज होस या यस्तै अन्य पर्वलाई नेपालमूखी बनाएर देखाउन सके कति सुन्दर हुन्थ्यो होला ? एनआरएन ठुला-ठुला व्यापारिक र परिवर्तनका कुरा गर्छ । नेपाली संध सङ्गठनहरू खादा र अतिथिमा मख्क छन् । भने केही त नेपाललाई आलोचनामात्र गर्न जन्मेका सङ्गठन पनि छन् ।
बर्मा गए कर्म सँगै भने झैँ जहाँ गएपनि हाम्रो सोच सकरात्मक हुन सकेको छैन । साना मसीना कुराको ठुलो प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र र संस्कृतिलाई पर्छ भन्ने प्रवासमा रहेका हाम्रा विज्ञ समूहलाई थाहा नभएको पनि हैन । तर किन सुरु गर्दैनन नेपाल बनाउने कामको थालनी ? यो साललाई यस्तै भए पनि अर्कोसालको तीज मेड इन नेपाल बनाउँदा कस्तो होला ?
बिदेशमा म्हःपूजा, नेपाल सम्बत् र भाषा एक टिप्पणी
के हाम्रा पूर्वज नर भक्षी थिए ?
आईजिपि साहेव तपाईँ हिरो बन्नुस्, दिंवगत प्रहरीका श्रीमतीको सेतो धोतिको दाग होइन